Hadda waa la heli karaa beta-kii shanaad ee iOS 14 / iPadOS ee loogu talagalay kuwa wax soo saara | Wararka IPhone
Ignacio Sala | | macruufka 14, iPhone
Sida loo qorsheeyay, laba toddobaad ka dib markii la soo saaray beta-kii afraad ee iOS 14, Apple waxay soo saartay beta cusub, shanaad si gaar ah, beta oo hadda kaliya loo heli karo horumariyeyaasha. Oo la socota betakan, iyo sidii caadiga ahayd, midka u dhigma iPad-ka sidoo kale waa la heli karaa.
Cusboonaysiintaan cusub waxaa laga heli karaa OTA, markaa waa inaan tagnaa oo keliya xulashooyinka qaabeynta qalabkayaga, Cusbooneysiinta Guud iyo Software. Xilligan ma ogin waxa warku yahay kaas oo lagu soo saaray beta-kan cusub, markaa waa inaan sugnaa dhowr saacadood si ay horumariyayaashu ula qabsadaan.
Beta beta afaraad ee macruufka 14 soo bandhigay a ururinta qalab cusub oo loogu talagalay barnaamijka TV-ga. Intaa waxaa dheer, sidoo kale waxaa jira taageero loogu talagalay ogeysiiska soo-gaadhista COVID-19 API, oo ah taageero la heli karo dhowr toddobaad oo ku jira iOS 13 laakiin lagu daray saddexda betas ee ugu horreeya ee macruufka 14. Intaa waxaa dheer, shaqadani waxay leedahay tan ugu caansan meesha ku jirta xulashada qaabeynta.
Ku saabsan waxqabadka nolosha batteriga, halka beta-kii ugu horreeyay ee la sii daayay nooca xiga ee iOS 14 Waxay ahayd tii ugu dheereyd, halka kan afraad uu ahaa kii bixiyay ismaamulka ugu yar. Aynu rajeyno in Apple ay hagaajisay waxqabadka isticmaalka bateriga beta-kan cusub.
Goorma ayaa macruufka 14 la sii daayaa nooca ugu dambeeya?
Apple waxay ka faa'iideysaneysaa dhacdada si ay u soo bandhigto nooca cusub ee iPhone si loogu dhawaaqo soo bandhigida nooca cusub ee iOS. Haddii aan tixgelinno in sannadkan ku dhawaaqista iyo soo saarista baaxadda cusub ee iPhone-ka ay dib u dhaceyso illaa Oktoobar, waxay u badan tahay in Apple sidoo kale daahin sii deynta nooca ugu dambeeya. Waxaan rajeynayaa maya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 14 » Beta-kii shanaad ee iOS 14 / iPadOS loogu talagalay soo-saarayaasha hadda la heli karo
Apple Music Radio wuxuu ku dhashay saddex xarumood: "Apple Music 1", "Hits" iyo "Country"